नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ६ सय ९४
कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ६ सय ९४
काठमाडौँ । आज काठमाडौँ उपत्यकामा एक हजार ९ सय ३४ जना सहित देशभर ३ हजार ७ सय ४९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस व्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डा. जागेश्वर गौतमले आज देशका विभिन्न प्रयोगशालामा १६ हजार ५ सय ९८ जनामा रियल टाइम पीसीआर परीक्षण गर्दा ३ हजार ७ सय ४९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो ।
आज काठमाडौँमा एक हजार ६ सय ९२, भक्तपुरमा १ सय ३४ र ललितपुरमा एक सय ८ सहित काठमाडौँ उपत्यकामा एक हजार ९ सय ३४ जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । यस्तै आज ३ हजार ५ सय ६४ जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएसँगै हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या ८४ हजार ५ सय १८ पुगेको प्रा. डा गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै आज थप १९ जनाको मृत्यु भएसँगै हालसम्म कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ६ सय ९४ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आज देशभर ३६ हजार ५ सय ३३ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । सक्रिय संक्रमितहरुमध्ये २४ हजार एक सय ९४ जना होम आइसोलेसन र १२ हजार ३ सय ३३ जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् ।
उपत्यकामा आज थप एक हजार नौ सय ३५ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आजको नियमित प्रेस व्रिफिङ्मा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा.जागेश्वर गौतमले दिनुभएको जानकारी अनुसार उपत्यकामा थप एक हजार नौ सय ३५ जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो ।